Mirongatra indray ny aretina any Antsiranana: mpianatry ny oniversite maro voan’ny Covid 19 | NewsMada
Par Taratra sur 04/12/2020
Nivory ny tompon’andraikitra rehetra voakasiky ny ady amin’ny coronavirus tao Antsiranana, omaly. Misy tranga maromaro vaovao voatily ary efa voarain’ny minisiteran’ny Fahasalamana an-tanana izy ireo, izay tranga tsy misy fahasarotana avokoa.
Mirongatra indray ny valanaretina coronavirus ao amin’ny faritra Diana, indrindra ao amin’ny distrikan’Antsiranana I. Tena misy ny olona vaovao mitondra ny tsimokaretina any amin’ny faritra, saingy tsy mbola misy tatitra ofisialy azon’ny foiben’ny fibaikoana ny ady amin’ny Covid-19, hatramin’ny omaly. Efa lasa nidina eny ifotony kosa ny minisiteran’ny Fahasalamana miaraka amin’ny sampandraharaha fanaraha-maso ny valanaretina, hoy ny mpandrindra nasionaly ny foibe, jeneraly Andriakaja Elack. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, hatramin’ny omaly, 83 ny trangana coronavirus voatily, 70 amin’ireo miseho ao Antsiranana I avokoa ary mpianatra ao amin’ny oniversiten’Antsiranana ny 56. Efa nahitana tranga koa ao Ambanja sy Nosy Be. Manaraka fitsaboana eny amin’ny hopitaly avokoa ny tranga voatily rehetra, izay tsy nampiseho soritraretina ety ivelany. Tranga tsotra tsy misy fahasarotana ireo rehetra voatily hatreto. Mitohy koa ny fanaraha-maso ireo olona rehetra nifanerasera tamin’ny marary, izay efa notilina PCR.
Nanamarika ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, profesora Rakotovao Jean Louis fa voafehy ny valanaretina, tsy mola resy ny coronavirus. Efa nandefa ekipa any amin’ireo toerana mbola ahitana tranga vitsivitsy ny minisiteran’ny Fahasalamana hanamafy ny fitsaboana. Nohamafisiny fa tena zava-dehibe ny fanajana ny fepetra rehetra isaky ny faritra apetraky ny CRCO ho fitandroana ny fahasalamana. Tsy mitovy amin’ny tranga misy any ivelany ny eto Madagasikara satria fantatra fa 40% ihany no voan’ny tsimokaretina amin’ny tanàn-dehibe efatra nohadihadina teto amintsika ka tsy mampatahotra izany, hoy ny nambarany.
Ho an’ireo mahatsapa fa voan’ny gripa tokony hanatona tobim-pahasalamana izy ireo fa vonona ny tobim-pahasalamana na inona na inona fisehoany ary misy ny fanafody handraisana an-tanana azy ireo, araka ny fanentanana nataony tao amin’ny tambajotra sosialy.